Afaka mitombo ve ny fisarihana? (+ Fomba 7 hanintonana olona iray) - Fifandraisana
Afaka mitombo ve ny fisarihana? (+ Fomba 7 hanintonana olona iray)
Betsaka amintsika no manala ireo daty mety hitranga izay tsy dia mahasarika fisarihana ara-batana.
Mahatsapa izahay fa mandany fotoana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny olona tsy mahasarika anay.
Saingy, amin'ny fanaovana izany, dia tsy jerentsika ireo olona mahatalanjona mety ho lalao mety tsara ho antsika.
Sarotra ny maka sary an-tsaina fa mety haniry olona iray tsy hitantsika manintona ara-batana isika, saingy mety hitranga izany!
manao sonia izy fa tsy izany aminao
Arakaraka ny ahalalanao olona iray no avo kokoa ny fahafahanao manintona azy ireo rehefa mandeha ny fotoana.
Ny fandoroana miadana dia mety haharitra kokoa amin'ny resaka fifandraisana mahomby sy mahasalama, noho izany dia mendrika ny dinihina io daty io izay tsy nahitanao manintona teo noho eo.
Noho izany, ny valin'ny fanontaniana, “Afaka mitombo ve ny fisarihana?” dia azo antoka ENY!
Andao hizaha izany bebe kokoa ary hijery ny fomba ahafahanao manintona olona iray.
1. Mahaiza misaina.
Raha miditra amina zavatra tsy misaina ratsy ianao, na efa mieritreritra ny ratsy indrindra, dia tsy manome fotoana mety azy ny zavatra.
Omeo fotoana izy ireo hanehoany ny tenany manokana ary misokatra amin'ny fahafantarana azy ireo.
Arakaraka ny ahafahanao mangatsiaka sy mankafy mandany fotoana miaraka amin'izy ireo no hahalalanao azy ireo amin'ny sehatra lalindalina kokoa - ary vao mainka ianao ho liana amin'izy ireo, na dia tsy manao izany aza ianao voalohany mahita azy ireo manintona.
Arakaraka ny fisokafanao no ahazoana milamina kokoa izy ireo ho, ary avelan'izy ireo hidina ny mpiambina azy ireo ary hampiseho aminao ny halehiben'izy ireo tokoa.
Tsarovy fa, satria tsy manintona azy ireo eo noho eo fotsiny ianao dia mety ho dodona hahafantatra anao bebe kokoa ary mety haniry anao tokoa.
Mbola te hampiaiky volana anao izy ireo ary te hahafantatra anao, ka tokony hanome fotoana azy ireo ianao.
2. Diniho ny zavatra tsapany momba anao.
Mety tsy mahatsapa afomanga ianao, fa mety mahatsapa - tohanana, matoky tena, mahatsikaiky, mahafinaritra.
Rehetra zavatra tsara!
Mety tsy dia hendry ianao amin'ny olona iray, fa ny fanintona ara-batana dia mety hitombo amin'ny valiny ara-pihetseham-po ananantsika rehefa miaraka amina olona iray isika.
Azonao atao ny manintona olona iray mifototra amin'ny fomba itondrany anao, ny fomba ahatsapany anao, ary ny fotoana mahafinaritra anananao rehefa miaraka aminy ianao.
Mety tsy ho eo noho eo izany, fa hivoatra rehefa mandeha ny fotoana ary azonao atao ny manafaingana izany amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fahatsapanao izay tsapany.
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny fifandraisana dia ny fahatsapan'ny olon-kafa anao, ary mila zavatra maharitra izy io mba hanisa.
Na iza na iza dia afaka mampihetsi-po anao mandritra ny alina! Cliché tena izy io, fa tsy hoe iza no tianao handany ny asabotsy alina - fa tianao ny handany ny Alahady tontolo andro miaraka amin'ny…
3. Apetraho ny sehatra.
Raha tsy manintona olona ianao ara-batana dia mora ny mijanona ao amin'io fisainana io ary manomboka mahita ny zava-drehetra amin'ny alàlan'io solomaso io.
Raha te hahasarika olona ianao dia azonao atao ny manandrana manova zavatra kely! Mandehana daty amin'ny toerana mahazatra-tantaram-pitiavana hijerena raha mitarika ny toe-po izany.
Raha mba nahita ilay olona hafa mandeha an-tongotra antoandro amin'ny antoandro ianao dia tsy dia mahagaga raha tsy nanam-bintana ny fisarihana.
Mety hahatsapa ho hafa tanteraka ianao rehefa ao anaty baraon'ny cocktail labozia ianao, na mivoaka hisakafo hariva mahafinaritra.
Noho izany, apetraho ny sehatra, asehoy daty mahafinaritra, ary mandehana amin'ny saina malalaka.
Mialà amin'ny ratra ara-tsaina anananao momba ny fahatsapanao an'ity olona ity ary miditra amin'ny toe-po amam-pitiavana.
4. Eritrereto izay maharitra.
Impiry no niasa marina ny zavatra - salama! - miaraka amin'ny olona hitanao fa manintona ara-batana?
Azontsika atao ny manintona antsika amin'ny fomba tiantsika ny endrik'olona na ny fombany ary tsy jerentsika ireo olana lalindalina kokoa izay hisakana ny zavatra tsy hiasa maharitra.
Raha sahirana loatra ianao mieritreritra ny hafanan'izy ireo, dia mety tsy te-hiatrika ny olan'ny fanoloran-tenany ianao, na ny tsy fanananao zavatra iraisana!
Amin'ny famelana ny tenanao hanintona olona iray rehefa mandeha ny fotoana, dia omenao fotoana ny tenanao hahafantatra azy ireo marina ary hamantatra hoe mifanentana amin'ny inona ianao.
Eritrereto ny halehiben'ny mpiara-miasa amin'izy ireo amin'ny fotoana maharitra sy ny faharetany miaraka amin'izy ireo.
ny fomba hanaovana 3 volana mandeha amin'ny alalan'ny fifadian-kanina
Izy ireo dia mety hahatonga anao hahatsapa ho tsara amin'ny fomba tena izy ary afaka mahita maharitra hatrany amin'ny ho avy ianao.
Ny olona izay tadiavinao dia mety ho fotoana fohy fotsiny, ary noho izany dia tsy mifanentana sy manintona lavitra.
5. Fifandraisana amin'ny tombontsoan'ny tsirairay.
Raha tsy mahasarika olona ianao dia miezaha hifantoka amin'ny zavatra itovizanao.
Amin'ny fijerena bebe kokoa ny fahaizanao mifanaraka amin'izany, dia afaka manintona olona iray ianao rehefa mandeha ny fotoana.
Angamba mety mifanaraka tsara fotsiny ny fomba fiainanao satria samy tia mihetsiketsika ianao, na ianareo samy ao anaty alina mangina miaraka amina boky.
Ity karazan-javatra ity dia mety tsy dia mahaliana toy ny firaisana ara-nofo mafana fo amin'ny olona manintona ara-batana, fa izany no mahatonga ny fifandraisana mahomby sy mahasalama.
Raha samy tafiditra amin'ny fianan'ny tsirairay avy ianareo , zavatra tsara ianao.
Indraindray ny fisarihana ara-batana dia miala vetivety, fa ny mifanentana dia miorina amin'ny fomba ahafahanao miara-manamboatra ny fiainanao miaraka sy mifaly, nefa tsy manao sorona manokana.
6. Eritrereto ny lasa.
Angamba ianao sabotaging ny fifandraisana mety lehibe amin'ny filazanao amin'ny tenanao fa tsy tianao ilay olona mampiaraka anao.
Mety manandrana milaza amin'ny atidohanao ianao fa 'namana fotsiny' izy ireo raha sorohy tsy haratra intsony.
Raha tsy mamela ny tenanao hisarika olona ianao dia tsy afaka holavin'izy ireo mihitsy, rehefa dinihina tokoa.
Diniho ny zavatra niainanao taloha tamin'ny fiarahana sy ny fifandraisanao ary eritrereto ny fomba mety hitatanany anao ankehitriny.
Mety hisalasala ianao hamela ny tenanao tena hianjera amina olona iray, fa manandrama mitadidy fa tsy ny olona rehetra no mitovy!
Tsy hoe rehefa nandratra anao ny olona iray dia tsy midika hoe hanao izany ny olon-drehetra. Afaka misokatra amin'ny fitiavana ianao na dia matahotra an'io aza, ary, raha olona mety izy ireo, dia tena handoa izany.
7. Diniho ny fifaninanana.
Tsy hanome sosokevitra ny hampitaha ny fiainanao amin'ny hafa izahay, fa mety ho tena manampy amin'ny karazana toe-javatra toy izany.
Raha mampiaraka olona tsy mahasarika anao ara-batana ianao dia mazava ho azy fa misy zavatra hafa mahaliana anao.
Mety ho ilay izy ireo manana ny tsirony tsy fantatra amin'ny mozika toa anao, na ny hoe izy ireo irery no olona niaraka taminao izay tena mahatonga anao hatoky tena sy ho faly!
Azo antoka fa mety hahita olon-kafa tianao bebe kokoa jerena ianao, saingy… te-hampidi-doza amin'ny famoahana fifandraisana tena misy olona iray ve ianao?
fahaverezan'ny tononkalo iray an'ny fianakaviana
Rehefa mandeha ny fotoana dia azo antoka fa lasa manintona olona iray ianao. Fa tsy azonao ovaina ny toetran'ny olona mafana sy ny zavatra mahaliana azy!
Ny ankamaroantsika dia mieritreritra ny sakaizantsika nofinofy ary mieritreritra ny hanintona azy ireo betsaka!
Tsy eo noho eo foana anefa izany, fa mila maka antoka fa mitazona ny zava-misy tsy ampoizina isika.
Afaka mitombo ianao mahita olona manintona, noho izany zava-dehibe ny manomboka amin'ny fototra mafy orina miorina amin'ny toetranao, ny tombontsoan'ny tsirairay ary ny fomba fiaina mitovy amin'izany.
Raha mbola manana zavatra mivaingana hiasa ianao, dia mety hitombo ny fisarihana rehefa mandeha ny fotoana ary mety hiafara amin'ny fancying tena olona iray izay tsy nahasarika anao ara-batana ianao tamin'ny voalohany.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao mba hahasarika olona bebe kokoa? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fahasarotana ara-batana amin'ny fifandraisana?
11 Antony hampiarahana amin'ny olona tsy dia nahasarika ara-batana
Mahasarika fifandraisana ve ny mpanohitra? Ity no tokony ho fantatrao
Torohevitra 10 raha tsy manintona ny vadinao intsony ianao
Ahoana no hahalalana raha manintona ianao: Famantarana 10 no tadiavina
Nahasarika ny faharanitan-tsaina? Misy ny anton'izany
inona no hatao amin'ny fitsingerenan'ny taonan'ny sakaizanao
valiny zaridaina kianjan'ny madison
tsy nahatsapa ny zavatra tsapako aho
ahoana no hanontaniako lehilahy amin'ny text
izay tadiavin'ny zazavavy rehetra amin'ny fifandraisana
zavatra mora atao rehefa leo ao an-trano
fa maninona no sarotra amiko ny mifandray amin'ny masoko